Pisowifi Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Salama daholo, tsy ao anaty fonosanao amin'ny Internet ve ianao ary te hifandray amin'ny Wi-Fi haingana? Raha eny dia eto isika miaraka amin'ny fampiharana Android, izay fantatra amin'ny anarana hoe Pisowifi. Manolotra ny mpampiasa hifandray amin'ireo tamba-jotra Wi-Fi ampahibemaso izy io, tsy misy teny miafina, saingy mila mampiditra vola madinika ao anaty boaty WiFi Vendo ianao. Izy io koa dia manome ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fifandraisanao.
Misy fitaovana nomerika isan-taonina, izay nanamora ny fiainan'olombelona. Fa ny internet dia iray amin'ireo fananana tsara indrindra, izay manova izao tontolo izao ho vohitra. Ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia afaka mifandray amin'ny Internet. Mila zavatra roa fotsiny ny mpampiasa raha te hifandray amin'ny olona na aiza na aiza.
Ny zavatra voalohany dia ny fifandraisana Internet ary ny zavatra iray hafa dia fitaovana iray, izay ahafahan'ny mpampiasa mifandray amin'ny tamba-jotra. Miaraka amin'ireo fitaovana ireo dia afaka mizaha ny tany manontolo ny olona rehetra, na dia tsy mivoaka ny efitranony aza. Ka noho izany, ireo andro fitsangatsanganana amin'ny Internet no ampahany lehibe amin'ny hetsika isan'andro. Manao raharaham-barotra ny olona, ​​mianatra mianatra, mahazo fialamboly ary maro hafa.
Noho izany, afaka mankafy ny fotoanany rehetra amin'ny tambajotra ny olona. Noho izany ny fahazoana fifandraisana amin'ny tambajotra dia iray amin'ireo zavatra fototra. Noho izany, ahoana no ahafahanao mifandray amin'i Piso, ary ahoana ny fomba fiasa? Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io ianao dia mijanòna kely eto aminay fa hozarainay daholo izany.
Topimaso momba ny App Pisowifi
Izy io dia rindranasa Android, izay novolavolain'i PisoNet. Io no rafitra farany, izay ampahafantarina ny vahoaka. Amin'ny alalàn'ity rafitra ity dia afaka mifandray amin'ny Internet ny olona raha tsy misy teny miafina. Manolotra ny fomba taloha handoavana izany, dia amin'ny alàlan'ny vola madinika.
Misy rafitra tsotra, izay ametrahana ireo masinina Piso Vendo samihafa amin'ny faritra samihafa. Ny olona, ​​izay mila fifandraisana tambajotra eo noho eo, dia afaka mampiasa ny serivisy mamorona azy ary mahazo tambajotra fifandraisana haingana amin'ny alàlan'ny fampiasana vola madinika.
Tsy dingana sarotra ny mifandray amin'ny mpivarotra rehetra. Ny hany ilainao dia ity rindrambaiko ity, izay manolotra ny fampahalalana nomerika rehetra momba ny mpivarotra sy ny fonosanao. Tsy maintsy miditra amin'ny SSID an'ny mpivarotra amin'ny rindranasao ianao, amin'ny alalanao no ahazoanao miditra hahazoana fonosana.
Manolotra fonosana samihafa izy, izay azonao atao ny mifantina amin'ny alàlan'ny vola madinika. Tsy maintsy mampiditra vola madinika arakaraka ny takinao ianao. Raha vantany vao vita ny fepetra takiana dia azonao atao ny mampiasa ny fifandraisana tsy misy olana. Raha manana olana amin'ny fidirana ianao dia manome Piso wifi 10.0.0.1 fidirana amin'ny vavahady koa izy io.
Amin'ny alalàn'ity vavahady ity, azonao atao koa ny miditra amin'ireo serivisy ary mahazo ny fampahalalana rehetra momba ny fifandraisana wifi anao. Ity rindranasa ity dia manolotra, serivisy sasantsasany, izay azonao idirana sy ahazoana tombony. Manome ny mpampiasa handany fotoana izy io. 10.0.0.1 Misy fotoana fiatoana Piso wifi ihany koa, ahafahanao miato ny fotoana ifandraisanao.
Izy io koa dia manome ny mpampiasa hitahiry ny angona, amin'ny alàlan'ny fiatoana vavahadin-tserasera 10.0.0.1 Piso wifi. Manolotra endri-javatra hafa toy ny fitahirizana ny angon-drakitrao sy ny fotoananao izy io, izay ahafahanao mampiasa azy amin'ny andro hafa. Misy endri-javatra maro hafa amin'ity app ity, izay ahafahanao mahazo ny serivisy tsara indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny tambajotram-bahoaka.
Noho izany, ampiasao fotsiny 10.0.0.1 Piso wifi hahazoana ny serivisy fifandraisana Internet tsara indrindra. Afaka mahazo fanaraha-maso feno amin'ny fonosana fifandraisana ianao amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary ampidiro maimaim-poana ireo serivisy rehetra. Raha manana olana ianao amin'izay dia aza misalasala mifandray aminay.
Piso wifi 10.0.0.1 dia manolotra ny serivisy any Filipina amin'izao fotoana izao. Noho izany, afaka miditra amin'ny endri-javatra sy serivisy Piso ny olona avy any Filipina. Saingy tsy ho ela dia hampitombo ny serivisy manerana an'izao tontolo izao izany, izay ahafahan'ny rehetra miditra ao. Noho izany, raha tsy any Philippines ianao dia tsy maintsy miandry.
Anaran'ny fonosana org.pcbuild.rivas.pisowifi
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.0.3 ary ambony
10.0.0.1 Piso no fampiharana tsara indrindra ho an'ny olona, ​​izay mila fifandraisana Internet haingana sy haingana. Misy endri-javatra an-taonina amin'ity rindranasa ity, izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo fidirana tsy voafetra amin'ny fonosany. Izahay dia hizara ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity fampiharana eto ambany ity.
Easy antsipirian'ny Connection
10.0.0.1 Fiatoana amin'ny Internet
Internet mora sy haingana
Azo alaina ao amin'ny Google Play Store izy io ary azonao sintonina eto amin'ity pejy ity ihany koa. Raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana. Hita eo amin'ny farany ambony sy ambany amin'ity pejy ity izy io. Mila mikitika azy fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Pisowifi Apk dia manolotra fifandraisana Internet tsara indrindra, izay haingana, malama ary mora vidy kokoa. Noho izany, raiso ireo fiasa ireo, amin'ny alàlan'ny fampiasana an'ity rindrambaiko ity ary mankafy surf. Raha mila fampiharana sy fika mahavariana misimisy kokoa dia tsidiho hatrany ny anay Website.
Sokajy Apps, Business Tags Pisowifi, Pisowifi Apk, Pisowifi App Post Fikarohana
Ampidino ny Dark Play Apk ho an'ny Android [Fampiharana sarimihetsika 2022]